တောင်သမန်သားလေး: Apple ရဲ့ AirPods နားကြပ်ကို Android ဖုန်းနဲ့ အသုံးပြုနည်း
Apple ရဲ့ AirPods နားကြပ်ကို Android ဖုန်းနဲ့ အသုံးပြုနည်း
လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က ပလပ်ပါက်မဲ့ iPhone7နဲ့အတူတွဲဖက် မိတ်ဆက်ပြီးနောက် Apple ရဲ့ AirPods နားကြပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝယ်ယူလို့ ရခဲ့ပါတယ်။ iPhone7နဲ့ နားကြပ်တွဲသုံးဖို့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက Bluetooth ကနေတဆင့်မို့ ဒါတွေဟာ Apple ရဲ့ တရားဝင်သီချင်းနားထောင်နည်းသစ် ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၀ ဝန်းကျင်ရှိ သင့်တင့်ကောင်းမွန်တဲ့ နားကြပ်တစ်စုံလောက် ဝယ်မယ်စဉ်းစားပါက ၁၅၉ ဒေါ်လာရှိတဲ့ AirPods က တန်ဖိုးမနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Apple ကနေတစ်စုံတစ်ခု လုပ်ပေးမှသာ ဒီနားကြပ်တစ်စုံ ရင်ခုန်စွာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Airpods က ငွေမမီအောင် ဈေးကြီးလွန်းတာကြောင့် တကယ်လို့ သင့်မှာ Android ဖုန်းတစ်လုံးရှိပြီး ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ပါက Android အတွက် Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးဖန်တီးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်။
အရင်ဦးဆုံး AirPods ကို charging case ထဲထည့်ရပါမယ်။ အဖုံးဖွင့်ပြီး ကျောဘက်က ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ခလုတ်လေးကို ရှာပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ် ဆက်ကိုင်ထားပြီး မီးအဖြူရောင်လေး တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါက ချိတ်မိသွားပြီဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Android ဖုန်းမှာ Bluetooth settings ကို ဖွင့်ပါ။ List ထဲမှာ AirPods ကို ထောက်ပြီး accept လုပ်ပေးရပါမယ်။
AirPods ကို Android ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ပေးရပါမယ်။ အဆင့်မြင့် Bluetooth နားကြပ်တစ်ခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by lin linn at 3:48 AM
iPhone 3GS ကိုတောင်ကိုရီးယားမှာ ပြန်လည်ရောင်းချတော့မည်
Myanmar All Sim Register (MPT, Telenor, Ooredoo, M...
ကား/ဆိုင်ကယ်တိုင်း တပ်ထားသင့်တဲ့ Myan Track Pro - ...
Youtube Video များကို Software မသုံးပဲ MP3 Audio အ...
ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကို Gmail ...
Samsung ဖုန်းများကို Sim Unlock ပြုလုပ်နည်း [Offic...
ဖုန်း Sim Card lock ကျသွားတဲ့အခါဖြေရှင်းနည်း
Android Device တစ်လုံးကို ရောင်းမချမီ ပြုလုပ်သင့်သ...
အင်တာနတ်သုံးနေစဉ် အသုံးမပြုတဲ့ App တွေပိတ်ထားနည်း
Apple ရဲ့ AirPods နားကြပ်ကို Android ဖုန်းနဲ့ အသုံ...
Samsung J2 SM-J201F ဖုန်းကို Root မလိုပဲ IMEI ဖြေရ...
Samsung Galaxy Cooper GT-S5830 ဖုန်းဗားရှင်း 2.3.6...
Facebook Account နှင့် G-mail Account အသစ်ကို ဖုန်...
Facebook Video များကို အလွယ်တကူ download ပြုလုပ်နည...
Facebookမှာ မိမိသူုယ်ချင်းက မိမိကိုTagဆွဲရင် မိမိက...
မိမိဖုန်း နှင့် ဆင်းကဒ် အချက်အလက်များကို ရသူနိုင်သ...
Android ပိုင်ရှင်တွေ ကြိုးစားကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေး က...
Universal samsung FRPFriday, December 23, 2016 Wi...
How To Root Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570Y/F) F...
Samsung Galaxy J7 Prime (SM-G610F/M) ကို ROOT ပြုလ...
ဖုန်းထဲကနေ မြ၀တီ ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ရှုနည်း
Android ဖုန်းတွေကို Root လုပ်နည်း မြန်မာဖောင့်ထည့်...
မိမိဖေ့ဘုတ်စ် အကောင့် လုံခြုံရေးတွက်2Step ခံနည်း...
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတွေက မိမိအကောင့်ထဲမှာ Post ...
Facebook မှာ မိမိ Like လုပ်ထားတဲ့ Page တွေကို သူငယ...
ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Facebook အကောင့်ကို Gmai...
♪ iOS မှ Android သို့ပြောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာ ♫
♪ Android အသုံးပြုသူတိုင်း သုံးသင့်တဲ့ စွမ်းဆောင်ခ...
မိမိ Facebook အကောင့်ကို Photo Lock မကျအောင်ကာကွယ်...
Facebook မှာ ကိုယ်ပိုင် Like Page ပြုလုပ်နည်း
Online ပေါ်မှာ ကာရာအိုကေဆိုနိုင်တဲ့ Smule v4.0.7
Samsung Galaxy J1 Mini SM-J105B ဖုန်း ဗားရှင်း 5.1...
Miracle Box ကိုဖွင့်လိုက်ရင် ပြန်ပိတ်သွားတဲ့ Error...
♪ SIM Card များကိုအလွယ်ကူဆုံး မှတ်ပုံတင်ကြမယ် ♫
♪ သင့် စမတ်ဖုန်း အဟောင်းများကို အသုံးချနည်းများ ♫
♪ သင့်ရဲ့ Android Device ကို ကားရဲ့ အသံစနစ်နဲ့ ချိ...
♪ Facebook Profile Picture မှာ Photo Frame များကို...
သင့်ချစ်​သူ ဘယ်သူနဲ့ ဖုန်းပြော SMS ပို့နေလဲ မိမိဖု...
မက်ဆေ့ပို့ လာတဲ့ဖုန်းသို့ အော်တိုစာပြန်ပို့နည်း
Android Devices များကို OTA Updates တင်နည်းများ
amsung Galaxy A9 Pro SM-A9100 ဖုန်းဗားရှင်း 6.0.1 ...
Samsung ဖုန်းတွေ အတွက် အထူးရေးသားထားတဲ့ Samsung FR...
Moto G4 Plus ဖုန်းတွင် Bootloader Warning ကိုဖြေရှ...
♪ “Samsung Galaxy J1 (2016)” ♫
♪ ဖုန်းထဲမှာပြောဆိုသမျှတွေကို Recording ဖမ်းယူထားေ...
♪ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ Bluetooth5ထွက်ရြှိ...
စမတ်ဖုန်းကို ဟက်ကာများရန်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် အချ...
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတွေ နောက်ထပ်အပ်လို့မရအောင် ...
မိမိ Facebook Account ကို သူငယ်ချင်ထံ အမွေပေးထားနိ...
Friend တွေရဲ့ Gmail ကို ဆေးထိုးချင်သူတွေအတွက် နာမည...
မြန်မာ Keyboard အမိုက်စားသုံးမယ် - Myanmar Keyboar...
♪ My Ooredoo App ဖြင့် ပတ္တမြား FM ကို နေ့စဉ် နားဆင...
♪ Android Phone မှာ ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ပေးမ...
HiFont ဖြင့် ttf ဖောင့်များအသုံးပြုနည်း
Mp3 သီချင်းတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဖရီးဒေါင်းယူနည်း
Android 7.1.1 Nougat ဗားရှင်းကို Root လုပ်နည်း
မြန်မာဖောင့်လှလှ ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ - HiFont - Cool...
ဖုန်းလာရင် မအားသေးပါလို့ဖြေပေးမယ့်အပြင် SMS လည်းအေ...
ဗီဒီယိုကို Live Wallpaper အဖြင့်အသုံးပြုနည်း
အလွယ်တကူ ဆင်းကဒ်အားလုံးကို မှန်ပုံတင်နိုင်သည့် Mya...
မြန်မာ့ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ များကို အလွယ်တကူ လေ့လာ...
မိမိအကောင့်မှာ Friend တွေဘဲ Comment ပေးလို့ရအောင်လ...
PC တွက် Viber မှာ မြန်မာစာမှန်ကန်စေရန် Zawgyi Font...
♪ ၀င်မလာစေချင်တဲ့ Call & SMS တွေကို BlackList လုပ်...
♪ မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကို PDF ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားန...
ဖုန်းမှန်ပေါ်မှာလက်လေးတင်လိုက်တာနဲ့ lock ဖွင့်ပေးတဲ...
မိမိဖုန်းထဲကဖျက်မိလိုက်တဲ့ ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ သီချင...
♪ စမတ်ဖုန်း ၊ တက်ဘလက်များမှာ ဘက်ထရီ သက်သာစေဖို့ Ma...
♪ Facebook မှာ Schedule လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်နည်း ♫
ဘက်ထရီသက်တမ်းအကောင်းဆုံး ဖုန်း (၆) မျိုး
အွန်လိုင်း password များကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ...
Recovery ဆိုတာဘာလဲ နဲ့ အသုံးများသော Recovery များအ...
2017 Android Tool Collection ရယူပါ
SP FLash Tool Language ပြောင်းမယ်
♪ Samsung Firmware များကို Download ရယူရတာလွယ်ကူတဲ...